‘जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी गाउँवाट लखेट्ने बिप्लपको घोषणा ( पूरा हेरि शेयर गरौ) – PathivaraOnline
Home > समाचार > ‘जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी गाउँवाट लखेट्ने बिप्लपको घोषणा ( पूरा हेरि शेयर गरौ)
admin March 19, 2019 समाचार 0
काभ्रे । आपराधिक क्रियाकलापपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई गाउँमा प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘लाठी लिएर लघार्ने’ उद्घोष विप्लव समूहले गरेको छ । विप्लव समूहका सबै नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका छन् । ‘हामीलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले हामीले पनि दलका नेताहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउँछौं’ विप्लव समूहका नेता रेशम नेपालीले भने।
फोन सम्पर्कमा आएका नेता नेपालीले सरकारले आफ्ना पार्टीका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएकाले अन्य दलका गतिविधिलाई पनि आफूहरुले प्रतिबन्ध लगाउने बताए । ‘हामी छलफकै क्रममा रहेका छौं, जिल्लाको सांगठनीय अभियान सुदृढ बनाउँदै विकास निर्माणमा समेत सघाउछौं’, नेपालीले भने, ‘जनताको भावनाविपरित काम गर्नेलाई कारबाही गर्छौ ।’ तर नेपालीले कस्तो कारबाही भन्ने चाहिँ खुलाएनन् । पार्टी नीति बन्दै गरेकाले तत्काल के गर्ने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको भन्दै सो समूहले ग्रामिण भेगमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिलाई खेद्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
अमेरिकामा पनि प्रचण्ड प्रति आक्रोस उच्च, मानवअधिकार उलंघन आरोप लगाएर अमेरिकामा पक्राउ गर्न माग – यस्तो छ कारण !
निर्मला ह’ त्या’का’ ण्डः २७ महिना बिति सक्दा प्रहरीको अनुसन्धानले बल्ल यस्तो भन्दै छ
पैदल हिँडेर घर जानेहरुको पीडा देखेपछि प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो प्रयास!
दमकमा यस्तो शिशु जन्मेपछी सबै परे तिनछक्क, हेर्नेको घुइचो – हेर्नुहोस